पेप ग्वार्डिओलाको ट्रान्सफर सर्टलिस्ट बाहिरियो, यी ८ खेलाडीलाई सिटीमा ल्याउन चाहन्छन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पेप ग्वार्डिओलाको ट्रान्सफर सर्टलिस्ट बाहिरियो, यी ८ खेलाडीलाई सिटीमा ल्याउन चाहन्छन्
काठमाडौं। म्यान्चेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला आफ्नो टिकलाई अझै मजबुत बनाउने उपायको खोजीमा छन् । लगातार २ पटक प्रिमियर लिगको उपाधि जितेपनि च्याम्पियन्स लिगबाट निराशाजनक बहिर्गमनपछि उनी अझै आफ्नो टिमबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले नयाँ सिजनका लागि क्लवमा ल्याउन चाहेका खेलाडीको सूची तयार पारेका छन् ।
डेली मिररका अनुसार ग्वार्डिओलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा लिसेस्टर सिटीका ह्यारी मग्युरे छन् । अर्का सेन्टर ब्याकको लागि ग्वार्डिओलाको चाहना अयाक्सका कप्तान म्याथिज डिलाइट हुन् । यद्यपि यी १९ वर्षे खेलाडीको पछाडि ग्वार्डिओला मात्र होइन जर्मन क्लव बायर्न म्युनिख, स्पेनिस क्लव बार्सिलोना र इङलिस क्लव लिभरपुल पनि छन् । अब उनलाई बसले अनुबन्ध गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
ग्वार्डिओलाले एथ्लेटिको मड्रिडका मिडफिल्डर रोड्रीलाई पनि सिटी ल्याउने योजना बनाएका छन् । रोड्रीलाई बार्सिलोनाका सर्जियो बसक्वेट्ससँग तुलना गरिएको छ जसमाथि बार्सिलोनाको प्रशिक्षक रहँदा ग्वार्डिओला निकै भर पर्थे । रोड्रीका टिममेट सोल निगुएज पनि ग्वार्डिओलाको सूचीमा छन् । एट्याकिङ लाइनमा ग्वार्डिओलाले बेनफिकाका जोआओ फेलिक्सलाई ल्याउन चाहेका छन् । १९ वर्षे यी पोर्चुगिज स्टारलाई भोलिका रोनाल्डो भन्ने गरिएको छ । यसबाहेक लिसेस्टर सिटीका बेन चिलवेल, लियोनका हौसेम और र इन्ट्राक्ट फ्रांकफर्टका लुका जोभिक पनि ग्वार्डिओलाले ल्याउन चाहेका खेलाडी हुन् ।